यसरी राखौं बच्चाको ख्याल जाडो मौसममा - ज्ञानविज्ञान
हिँउद महिना सुरु भइसकेको छ । अब मौसमी तापमान क्रमस ओह्रालो लाग्नेछ । जाडोले बृद्धबृद्धा, रोगी र बालबालिकाको दिनचर्या असहज बनाइदिन्छ । यतिबेला बच्चालाई खास ख्याल गरिएन भने उनीहरुलाई रुँघा, ज्वरोले सताउने भय रहन्छ । यस क्रममा पनि हेलचेक्रयाई गरियो भने निमोनिया हुनसक्छ । निमोनिया मृत्युको कारण समेत बन्न सक्छ ।
त्यसैले बच्चालाई बाह्य वातावरणसँग एडजस्ट गराउन त्यही किसिमको खानपान, स्यहारसुसार आवश्यक हुन्छ । यतिबेला न्यानो लुगा लगाउने मात्र होइन, पोषिलो र तातो खानेकुरा पनि दिनुपर्छ । खासगरी झोलपदार्थ ख्वाउनुपर्छ ।
नवजात शिशुको लागि
जाडो महिनामा बालबालिकाहरुलाई स्याहार्न एकदमै गाह्रो हून्छ । उनीहरुलाई चिसोबाट जोगाउन नसके तुरुन्तै विरामी हुनसक्छ । त्यसमा पनि नवजात शिशूहरु झनै नाजुक हुन्छन् । उनीहरुको हेरविचारमा अत्यन्तै सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ । शिशुलाई हरेक रात तेलले मालिस गर्ने प्रचलन छ । यस विषयलाई लिएर प्रश्न उठ्छ, के हरेक मौसममा एकै प्रकारको तेलले शिशुलाई मालिस गर्नु हुन्छ ?
अहँ हुँदैन । तपाईंले आफ्नो शिशुको मालिसका लागि मौसमका आधारमा तेलको छनोट गर्नुपर्छ । यहाँ हामी जाडो मौसममा कुन तेलले मालिस गर्नु ठिक हुन्छ भन्ने जानकारी दिँदैछौं ।
जाडोमा तोरीको तेल
जाडो मौसममा नवजात शिशुलाई मालिश गर्न तोरीको तेल सबैभन्दा उत्कृष्ट हुन्छ । यसले शरीरमा गर्मी प्रदान गर्छ । कतिपय ठाउँहरुमा तोरीको तेललाई लसुन वा मेथीसँग तताएर मालिस गर्ने चलन छ । लसुनमा एन्टीभाइरल तथा जीवाणुरोधि गुण हुनछन् । यसले प्रतिरक्षा प्रणालीलाइ बलियो बनाउने विश्वास गरिन्छ । यसैगरी मेथीले शरीरमा आराम दिन्छ ।
कतै चाहिँ तोरीको तेललाई मसाज गर्नुभन्दा अगाडि जिरा हालेर तताइन्छ । यदि यसको तीखो गन्धका कारणले तपाईं तोरीको तेलको उपयोग गर्न चाहनुहुन्न भने विकल्पमा बदाम वा जैतूनको तेल पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
घिउँ कति पौष्टिक ?
स्थानीय घिउँलाई खानाका लागि सबैभन्दा पौष्टिक मानिन्छ । तर बच्चालाई मालिश गर्ने कुरा गर्दा भने घिउँलाई पूर्णरुपमा नजरअन्दाज गर्दा हुन्छ । घिउँ अत्यधिक लेसाइलो हुन्छ र यसले बच्चाको नाकको पोरा बन्द गर्न सक्छ ।
Topics #जाडो मौसम #बच्चा
Don't Miss it मिठाइ बढी खानु हुन्छ ? कोलेस्टोर बड्ने डर !
Up Next सुपारी सेवन गर्दा यस्तो समस्या हुनसक्छ
जानकारी शेयर गर्ने गर्नुहोला ता की तपाइको फेसबुक हेर्नेले पनि केही ज्ञान पाओस.. भरपूर प्रोटिन पाइने अन्डामा सेतो र पहेँलो…